परमेश्‍वरले सबै थोक प्रदान गर्न र मानवजातिको अस्तित्वलाई कायम राख्‍न आफ्‍नो सर्वशक्तिमान् र बुद्धिमानी मार्गको प्रयोग गर्नुहुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मलाई लाग्छ कि तिमीहरूको हालको बुझाइ अझै काफी सतही र शाब्दिक छ, तर, मेरो सङ्गतिका यी दुई पक्षहरू सुनिसकेपछि, के तिमीहरूले कम्तीमा परमेश्‍वरले मानव जातिको लागि प्रदान गर्न कस्ता विधिहरू प्रदान गर्नुहुन्छ वा परमेश्‍वरले मानव जातिलाई कस्ता कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्छौ? के तिमीहरूसँग आधारभूत अवधारणा, आधारभूत बुझाइ छ? (छ।) तर के मैले सङ्गत गरेका यी दुई पक्षहरू बाइबलसँग सम्बन्धित छन्? (छैनन्।) के तिनीहरू अधिराज्यकालमा परमेश्‍वरको न्याय र दण्डसँग सम्बन्धित छन्? (छैनन्।) त्यसो भए मैले किन तिनीहरूको सङ्गत गरेँ त? के यो मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई जान्न तिनीहरूलाई बुझ्नैपर्ने भएकोले हो? (हो।) यी कुराहरू जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ र तिनीहरूलाई बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। तैँले परमेश्‍वरलाई उहाँको सम्पूर्णतामा बुझ्न खोज्दा, आफूलाई बाइबलमा सीमित नगर् र आफूलाई मानिसले गर्ने परमेश्‍वरको न्याय र सजायमा सीमित नगरा। यो भन्नुको मेरो उद्देश्य के हो? यो परमेश्‍वर भनेको उहाँले छान्नुभएका मानिसहरूको मात्र परमेश्‍वर होइन भनेर मानिसहरूलाई थाहा दिनु हो। तैँले हाल परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछस् र उहाँ तेरो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, तर के उहाँलाई नपछ्याउनेहरूको उहाँ परमेश्‍वर हो त? के परमेश्‍वर उहाँलाई नपछ्याउने सबै मानिसहरूको परमेश्‍वर हो? के परमेश्‍वर सबै कुराहरूको परमेश्‍वर हो? (हो।) त्यसो भए के परमेश्‍वरका कार्य र क्रियाहरू क्षेत्रमा केवल उहाँलाई पालना पछ्याउनेका लागि मात्र सीमित हुन्छन्? (होइन।) उहाँका कार्य र क्रियाहरूको क्षेत्र के हो? सबैभन्दा सानो स्तरमा, उहाँका कार्य र क्रियाहरूको क्षेत्रले सबै मानव जाति र सृष्टिका सबै कुराहरू समेट्छन्। उच्चतम स्तरमा यसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समेट्छ जुन मानिसहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले, हामीले भन्न सक्छौं कि परमेश्‍वरले सबै मानव जातिमाझ आफ्ना कार्य गर्नुहुन्छ र आफ्ना क्रियाहरू सम्पादन गर्नुहोस् र यो मानिसलाई परमेश्‍वरको सम्पूर्णतामा परमेश्‍वर आफैँलाई जान्न अनुमति दिन काफी हुन्छ। यदि तपाईं परमेश्‍वरलाई जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई साँचो रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई साँचो रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, आफूलाई केवल परमेश्‍वरको कार्यका तीन चरणहरूमा वा उहाँले विगतमा गर्नुभएका कार्यहरूका कथाहरूमा प्रतिबन्धित नगर्नुहोस्। यदि तैँले उहाँलाई त्यो तरिकाले जान्न चाहन्छस् भने, तैँले परमेश्‍वरमा सीमितता लगाउँदैछस्, उहाँलाई नियन्त्रण गर्दैछस्। तैँले परमेश्‍वरलाई केही एकदमै सानो कुराको रूपमा हेर्दैछस्। त्यसो गर्नाले मानिसहरूलाई कसरी प्रभाव पर्न सक्छ? तँ कहिल्यै पनि परमेश्‍वरको चमत्कारिकता वा सर्वोच्चता जान्न सक्षम हुनेछैनस्, न त उहाँको शक्ति र सर्वशक्ति र उहाँको अख्तियारको क्षेत्र नै जान्न सक्‍नेछस्। यस्तो बुझाइले परमेश्‍वर नै सबै कुराको शासक हुनुहुन्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार्ने तेरो क्षमताको साथै परमेश्‍वरको साँचो परिचय र स्थिति सम्बन्धी तेरो ज्ञानमा प्रभाव पार्नेछ। अर्को शब्दमा, यदि परमेश्‍वर सम्‍बन्धी तेरो बुझाइ क्षेत्रमा सीमित भएमा, तैँले प्राप्त गर्ने सक्ने कुरा पनि सीमित हुन्छ। त्यसैले गर्दा नै तैँले आफ्नो क्षेत्रलाई फराकिलो पार्नुपर्छ र आफ्ना क्षितिजहरूलाई विस्तार गर्नुपर्छ। तैँले यो सबै कुरा बुझ्न खोज्नुपर्छ—परमेश्‍वरको कार्यको क्षेत्र, उहाँको व्यवस्थापन, उहाँको शासन र उहाँले व्यवस्थापन गर्ने र उहाँले शासन गर्नेभन्दा माथिका सबै कुराहरू। यो यी कराहरू मार्फत हुन्छ जुन तैँले परमेश्‍वरका कार्यहरू भनी बुझ्नुपर्छ। यस्तो बुझाइको साथमा, तैँले यसलाई पहिचान नगरी महसुस गर्नेछस् कि परमेश्‍वरले सबै कुराहरूलाई तिनीहरूमाझ शासन गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र प्रदान गर्नुहुन्छ र तैँले आफू यी सबै कुराहरूको एक हिस्सा र एक सदस्य भएको पनि साँचो रूपमा महसुस गर्नेछस्। परमेश्‍वरले सबै कुराहरूको लागि प्रदान गर्नुहुने भएकाले, तैँले पनि परमेश्‍वरको शासन र प्रावधान स्वीकार गरिरहेको छस्। यो एक तथ्य हो को कसैले पनि नकार्न सक्दैन। सबै कुराहरू परमेश्‍वरको शासन अन्तर्गत आफ्नै नियमहरूको अधीनमा हुन्छन् र परमेश्‍वरको शासन अन्तर्गत, सबै कुराहरूसँग बाँच्नका लागि आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। मानव जातिको भाग्य र आवश्यकताहरू पनि परमेश्‍वरको शासन र प्रावधानले सँगै बाँधिएका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा नै, परमेश्‍वरको प्रभुत्व र शासन अन्तर्गत, मानव जाति र सबै कुरा अन्तर्सम्‍बन्धित, अन्तर्निर्भर र अन्तर्जडित हुन्छन्। यो नै परमेश्‍वरले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुको उद्देश्य र महत्त्व हो।
अघिल्लो: परमेश्‍वरले मानवजातिको लागि तयार गर्नुहुने दैनिक भोजन र पेय पदार्थ
अर्को: परमेश्‍वरले विभिन्न जातिहरूको बीचमा सीमाहरू तोक्‍नुभयो